Unhu—Mazano emuBhaibheri Anobatsira Muupenyu
Mukai! | Nhamba 3 2019
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiChangana (Mozambique) ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Douala Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Garifuna Georgian German Gitonga Greek Greenlandic Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kekchi Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Latvian Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mbunda Mongolian Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngangela Norwegian Nyaneka Nyungwe Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tlapanec Tok Pisin Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Bhaibheri rinotikurudzira kuva neunhu hwakanaka, uye rinotiyambira kuti tisava neunhu hwakaipa.
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Munhu anononoka kutsamwa anopfuura murume ane simba.”​—Zvirevo 16:32.
ZVAZVINOREVA: Kana tikashanda nesimba kuti tive vanhu vanozvidzora zvichatibatsira muupenyu. Tese tinombotsamwa dzimwe nguva, asi kutadza kuzvidzora kunogona kukanganisa zvakawanda. Dzimwe ongororo dzinoti vanhu vane hasha vanogona kutaura kana kuita zvimwe zvinhu zvavanozodemba.
ZVAUNOGONA KUITA: Dzidza kuzvidzora pane kungorega hasha dzako dzichikutonga. Vamwe vanhu vanofunga kuti hasha dzinoratidza kuti hausi gwara, asi ichocho hachisi chokwadi. Bhaibheri rinoti, “Munhu asingadzori hasha dzake akafanana neguta rakaputswa, risina rusvingo.” (Zvirevo 25:28) Chinhu chingakubatsira kuti uzvidzore kutanga wanyatsonzwisisa zvinenge zvaitika usati waita zvauri kufunga. Bhaibheri rinoti: “Njere dzemunhu dzinodzora kutsamwa kwake.” (Zvirevo 19:11) Kana tikatanga tanzwisisa nyaya yacho yese zvichatibatsira kuti tidzikame.
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Ratidzai kuti muri vanhu vanoonga.”​—VaKorose 3:15.
ZVAZVINOREVA: Zvinonzi vanhu vanotenda zvavanoitirwa ndivo vanofara muupenyu. Ndizvo zvinotaurwawo nevanhu vakambosangana nematambudziko akakura muupenyu hwavo. Vanoti kuisa pfungwa pazvinhu zvavainazvo pane kungofunga zvinhu zvavakarasikirwa nazvo ndiko kwakavabatsira.
ZVAUNOGONA KUITA: Zuva rega rega, nyora pasi zvinhu zvaunotenda. Izvi hazvifaniri hazvo kuva zvinhu zvakakura. Funga kunyange zvinhu zvinoita sezvidiki, zvakadai sekukwanisa kuona kunaka kwakaita denga panobuda zuva, kutaura nehama neshamwari, uye kuti wamuka uri mupenyu zuva iroro. Kana ukawana nguva yekufunga zvinhu izvi, zvichakubatsira kuti ufare muupenyu.
Zvakakoshawo kuti uratidze kuti unotenda hama neshamwari dzauinadzo. Paunoona zvinhu zvakanaka zvavanokuitira, ibva wavatenda, kana kuvanyorera tsamba chero kuvatumira meseji. Izvi zvichaita kuti muwedzere kuwirirana uye uchafara nekuti unenge wavaitira zvakanaka.​—Mabasa 20:35.
Unogona kuenda paIndaneti wodhaunirodha Bhaibheri rakarekodhwa. Rinowanikwa mumitauro 40 pawebsite yedu inonzi jw.org
IBVA MUSATI MAPOPOTEDZANA.
“Kutanga nharo kwakaita sekuvhurira mapopoma; ibva kupopotedzana kusati kwatanga.”​—ZVIREVO 17:14.
USANYANYA KUZVINETSA NEZVERAMANGWANA.
“Musambozvidya mwoyo pamusoro pezuva rinotevera, nekuti zuva rinotevera richava nekuzvidya mwoyo kwaro. Zuva rimwe nerimwe rinokwanirwa nematambudziko aro.”​—MATEU 6:34.
“Kukwanisa kunyatsofunga kucharamba kuchikurinda, uye ungwaru huchakuchengetedza.”​—ZVIREVO 2:11.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Unhu
Bhaibheri Nderekare Asi Richiri Kushanda
Kuwirirana Mumhuri Uye Neshamwari
Kushandisa Mari Zvakanaka
Bhuku Rabatsira Vakawanda
Nyaya Dziri Mumagazini Ino: Bhaibheri Rinogona Kukubatsira Here?
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku MUKAI! Bhaibheri Rinogona Kukubatsira Here?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe MUKAI! Bhaibheri Rinogona Kukubatsira Here?
Bhaibheri Rinogona Kukubatsira Here?
MUKAI! Bhaibheri Rinogona Kukubatsira Here?